Oggolaanshaha Hore - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Ogolaansho hore
Daawooyinka qaarkood ama adeegyadu waxay u baahan doonaan oggolaansho hore kahor intaan qorshuhu daboolin.
Oggolaanshaha Hore wuxuu hubinayaa inaad heshid daryeel habboon
Caymiskaagu si otomaatig ah uma daboolayo dhammaan nidaamyada, dawooyinka dhakhtarku qoro, qalabka caafimaadka ama adeegyada kale ee aad u baahan karto. Bixiyaha caafimaadkaagu wuxuu u baahan doonaa inuu soo gudbiyo oggolaansho hore oo loogu talagalay adeegyada qaarkood, dawooyinka, iyo qalabka.
Uma baahnid inaad soo gudbiso codsi oggolaansho hore. Dhakhtarkaagu wuxuu la shaqeyn doonaa kooxdeena Community Health Plan ee Washington (CHPW) si loo go'aamiyo haddii adeeg la daboolayo. Bixiyahaaga caafimaadka ayaa mas'uul ka ah gudbinta codsiyada oggolaanshaha hore ee CHPW. Hase yeeshe, waa masuuliyadaada inaad raacdo codsiyada.
Waxaad ka raadin kartaa adeegyo caadi ah iyo daaweyn u baahan oggolaansho hore adoo booqanaya bartayada bogga bixiyaha.
Sidee ayey CHPW go'aan uga gaaraan inay oggolaadaan ama diidaan codsi?
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington iyo adeeg bixiyayaasheeda waxay adeegsadaan tilmaamaha daryeelka ee ay qoreen khubarada dhanka daawada iyo caafimaadka habdhaqanka. Tilmaamahan waxay ka caawinayaan bixiyeyaasha inay ogaadaan goorta ay isticmaalayaan daaweyn qaarkood iyo dhibaatooyinka ay tahay inay iska fiiriyaan. Haddii dhakhtarkaagu codsigiisii ​​hore ee oggolaanshaha la diiday, waxaad xaq u leedahay inaad racfaan ka qaadato go'aanka. Gudbinta rafcaanka waxay ka dhigan tahay inaan dib uga fiirsan doonno go'aankeenna. Raadi macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka rafcaanka.
Si aad u codsato nuqul ka mid ah shuruudaha loo isticmaalo go'aan qaadashada, fadlan kala xiriir Adeegga Macaamiisha 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 711) 7 maalmood usbuucii 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 pm, Isniinta ilaa Jimcaha.
Dib u eeg Tilmaamaha Ogolaanshaha Hore iyo tusaalooyinka adeegyada caafimaadka ee u baahan oggolaanshaha.
Caymiska Dawada Qoraalka
Faa'iidadaada daawada rijeetada laguu qoro ma dabooleyso dhammaan daawooyinka. Qaarkood waxay u baahan karaan oggolaansho hore ka hor intaanan daboolin. Eeg liistada daawooyinka lagu daboolay caymiska daawada laguu qoray. Daawooyin kasta oo aan ka muuqan qaab-dhismeedkayada waxay u baahan yihiin oggolaansho hore. Fadlan tixraac kuweenna bogga manfaca daawada laguu qoro Wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad hadda qaadanaysid daawo aan ka muuqan liiska dawooyinka, waxaad weydiisan kartaa Faa'iidada Medicare ee CHPW inay ka dhigto mid ka reeban sharciyadayada caymiska. Guji si aad waxbadan uga barato ka reeban iyo go'aaminta caymiska.
Su'aalaha Oggolaanshaha Hore ee Xubinta
Ma u baahanahay inaan soo gudbiyo codsiyo oggolaansho hore?
Maya, wixii adeeg ama dawooyin ah ee u baahan oggolaansho, bixiyahaaga ayaa garanaya sida naloo soo gudbiyo dalab.
Waxaan helay daaweyn gaar ah waagii hore, laakiin hada qorshahaygu ma daboolin. Maxaa samayn karaa?
Adeegyada caafimaad ahaan lagama maarmaanka ah, oggolaansho hore waxay u dhaqmeysaa sidii tilmaame loogu talagalay waxa caymiska dabooli doono iyo kan aan dabooli doonin. Waxaa jiri kara daaweyn kale, sida daawada dhakhtar qoro ama adeeg la mid ah, oo qorshaha uu daboolayo. Xaaladdaas, dhakhtarkaaga ayaa kuu beddelaya adeeggan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahan tahay daaweyn gaar ah oo aan hadda la daboolin, waxaad na weydiin kartaa inaan ka dhigno mid ka reeban sharciyadayada caymiska. Waxaan tixgelin siin doonaa baahiyahaaga caafimaad markaan go aanka gareyno. Baro wax badan oo ku saabsan waxyaabaha ka reeban caymiska.
Codsigeyga dhakhtarkayga ee daaweynta aan ubaahanahay waa la diiday. Ma jiraan wax aan qaban karo?
Haa, waad xareysan kartaa rafcaan. Racfaanku waa codsi in dib looga fiirsado go'aan la gaadhay. Raadi sida loo soo gudbiyo mid.